Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အတင်းပြောရရင်ဖြင့်
Writer Sein Lyan Time 5:40 pm
တစ် လာဦး ဆိုလို့ အရင် တစ်လာဦးပါတယ်။
စက်နှေါ် နြေဲပီး စက်နေမကောင်းရတဲ့ကြားနော်
အတင်းအရင်ပြော.. အဲလေ အတင်း ပြောတာ ဖတ်လိုက်အုံးမယ်
ထူး ပါဘူး။ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ သုံးဆုလုံး ယူပီးမှ ဖတ်မယ်
အကိုနဲ့ညီမရဲ့ ၃၂ မင်္ဂလာနစ်လည်ကနေ အရှည်ဆက်လက်တည်တံခိုင်မြဲ အမြဲပျော်ရွင် စိတ်ချမ်းသာစေရန် ဆုမွန်တောင်းပါသည်.
ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ အိမ်အကြောင်းလေး လာဖတ်သွားတယ်ဗျ.
ချစ်သော ဖေဖေ၊ ချစ်သောမေမေတို့ ရွှေရတု၊ စိန်ရတု၊ ပတ္တမြားရတု... ရတုပေါင်း များစွာမှာ အမြဲ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ရွှေလက်တွဲနိုင်ကြပါစေ။
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ပီး ကြည်နူးမိပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ဒီလို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်လေးတွေ ညီလေး အမြန်ဆုံး ပြန်ရပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလျှက်
ပျော်စရာ မိသားစုလေး ...
ရှေ့ ဆက်ပြီး ထာဝရ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ နေနိုင်ကြပါစေ ။
အဖေတူသားဆိုတော့ ၁၅ နှစ် ကြီးတာ သာ ရှာယူပေတော့ စိန်မျောက်မျောက်ရေ ..
ထမင်းထုပ် ပြင်ထားပေးမယ်နော် ...း))
မအိန္ဒြာ မန့်ထားမှ သတိရတယ်
ဖအေတု သားလေး ဆိုပီး သိပ်ချစ်တတ်တာ ထည့်ကြွားသွားသေးတယ်။
ကြွားစိန် ကတော့ မနိုင်ဘူး
နေ မြန်မြန်ကောင်းပါစေ။ ခေါင်းကိုက်ရောဂါ အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းပါစေ
ချစ်သောသူနဲ့ အမြန်ဆုံး အတူ နေနိုင်ပါစေ
(အင်း၊ တစ်ယောက်ထဲ မန့်နေတာ ငါးခါရှိပီ။ အသံတွေ ထွက်လာောတ့မယ် ဟေဟေ့)
ဖိုးစိန် အမေက တကယ် နုတာပဲ။ မပြောရင် လုံးဝ မသိနိုင်ဘူး။ ပြောတော့လည်း ယုံစရာ မကောင်းဘူး။
ဖိုးစိန်တို့ မိသားစုက တကယ် ပျော်စရာပဲ။
၃၂ နှစ် မင်္ဂလာတဲ့လား။
တချိန်လုံး နေမကောင်းဖြစ်နေတာပဲ။ ခမဲလိုတာနေမယ်။
အမ် ..အဖေတူသားဆိုပါလား ဘလိုင်းကြီးနော် ..း)
ဖိုးစိန် ရဲ့ မိဘ ၃၂နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာမှသည် ၁၂၀ နှစ်ပြည့် တိုင်အောင် ကျန်းကျန်းမာမာ ဖြင့်လျှောက် လှမ်းနိုင်ပါစေ။
ဟာဟ ဖိုးစိန် တို့ကတော့ ဘလိုင်းကြီးကြွားတာ ဘာတဲ့ ဖအေတူသားတဲ့။
း) တော်တော်ဆိုးတဲ့ စိန်စိန်ပဲ
အတင်းပြောစရာ ရှားလို့ မိဘတွေအကြောင်း အတင်းတုပ်ရတယ်လို့ကွာ.. စိန်နော် သတိထားဟွန်းးး
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ အဲ့လို မိသားစုလေးကို တော်တော်လေး မက်မောမိပါတယ်ဗျာ... တယောက်နဲ့တယောက် နားလည်မူတွေနဲ့၊ သားသမီးတွေကိုလဲ ချစ်တတ်သလို သားသမီးတွေကလဲ မိဘကို ရိုသေလေးစားမူတွေနဲ့ တကယ့်ကို သာယာဖွယ် စံပြထားသင့်တဲ့ မိသားစုလေးပါ။ အားကျပါတယ်
ကိုဖိုးစိန် ကတော့ရှယ်ကြွားတာပဲ.... အဖေတူသားတဆိုတော့ ဘယ်လိုတူလဲဗျာ....
အဖေလို ကိုယ့်ထက် အသက် ၁၅ နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ မမကြီးလား... ဟီးဟီး ဖွလိုက်မယ်နော်.... ဘယ်လိုလဲ ရှင်းပြဦးနော်...
ချစ်တတ်တယ်၊ကြင်နာတတ်တယ် ဆိုတာတော့ ယုံတယ်ဗျာ...တကယ်ပါ... နေကောင်းကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်...ချစ်သူ နှင့် မြန်မြန်လက်တွဲ နိုင်ပါစေဗျာ...
သေပြီးမှများမွေးရင် ကြော်ငြာမင်းသားသေလို့ဝင်စားတယ် မှတ်ရမယ်..။
ဒါတော့ ဖိုးစိန် သက်သက်ကြွားတာ ဖိုးစိန် မေမေအသက်က အဲဒီလောက်ကို မရှိနိင်သေးဘူး
ဖိုးစိန်တို့ မိသားစု အကြောင်း ဖတ်ပြီးတိုင်း ကြည်ကြည် နူးနူး ဖြစ်မိတယ်...။
မိသားစုတွေ အမြန်ဆုံး ပြန်ဆုံပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ခရီး ဆက်နိင်မှာပါ။
သူငယ်ချင်း ဖေဖေနဲ့မေမေလည်း နောက်ထပ် ပတ္တမြားရတုတွေ စိန်ရတုတွေကို သားသမီးတွေ စုံလင်စွာနဲ့ ဆင်နွဲနိင်ပါစေ။
မိသားစုဘ၀ကပျော်စရာကြီးပါလား ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလိုပဲ အဖေနဲ့အမေကလည်း သိပ်ချစ်ကြတယ် မိသားစုစုံစုံညီညီ နေရတယ်ဆိုတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့.... :)
30 October 2009 at 06:53
ငါတို့သတိရတယ် နင်တို့အိမ်မှာ စုနေကြတုန်းက ညတိုင်း ဦးက သူ့ဘဝအကြောင်း နင်တို့အကြောင်း အန်တီ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတာရယ်ရတယ် ပျော်တယ် မိသားစုတစ်ခုထဲတိုးဝင်သွားရသလိုခံစားရတယ် နွေးထွေးတယ် ကြင်နာတယ် ညညနင်တို့မိသားစုသီချင်းလုဆိုတာ ထမင်းဝိုင်းမှာမဆံ့ပဲတစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ထပ်ထိုင်ပြီးစားခဲ့တာတွေးတိုင်းကြေနပ်တယ်
ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစု ဆိုတာငါလုံးဝထောက်ခံတယ် ငစိန်
အားလုံးကို သိပေမယ့် ပြန်ဖတ်ရတော့ အရမ်းကောင်းတယ်
ရေးခိုင်းတာကြာပြီးလေ ခုရေးပေးတော့ ကျေနပ်တယ်
အားလုံးက ညီအကိုတွေလေ ကဲကြမယ်
မယုံကြနဲ့ ဦးနဲ့ ငစိန်နဲ့က တခြားစီ
ငစိန်က စိတ်မရှည်ဘူး မထင်ရင်မထင်သလို လုပ်တယ်
မချစ်တတ်ဘူး ဦးနဲ့တခြားစီ စာဖတ်သူများ သေချာဂရုပြု
ကလျာတစ်ယောက်တော့ နင်က ထွတ်ထွတ်လူးခေါ်လို့လူးနေတယ် သေဖို့ပြင်ထားတဲ့ စိန်နန့်နန့်တဲ့
ဒီစာကို ဘယ်လောက်မှန်အော်ရိုက်ကျင့်ရလဲ ငစိန်သဘောပေါက်ပါ
နှစ် တရာတိုင် ပေါင်းရပါစေဗျာ....
ရေးထားတာလေး တကယ်ကြည်နူးစရာပဲ။ အားကျစရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ဆက်လက်ပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ။
၃၂နှစ်မြောက် မင်္ဂလာမှစ ရတုပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တွဲလက် ပိုပိုခိုင်မြဲပါစေ။။
ဖိုးစိန်ရဲ့ အဖေနဲ့အမေတို့ရဲ့ ၃၂နှစ်မြောက် မွေးနေ့မင်္ဂလာဆုတောင်းပေးတယ်။
အဖေနဲ့အမေ အတင်းကို အုပ်တဲ့အတွက် မုန့်ဖိုးဖြတ်ခံရမယ်။ :))
တကယ်ကို ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးပဲ .. အကို့ မိသားစုအကြောင်း ဖတ်ပြီးတိုင်း အပျော်တွေ ကူးသွားတတ်တယ် ..း))
အကို့ ဖေဖေနဲ့ မေမေ မင်္ဂလာနှစ်တွေ အများကြီး အများကြီးမှာ ဒီထက် ပိုမိုပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေ တိုးပွားပါစေ ..း))
အမြဲ ထာဝရပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ..း))
ဖိုးစိန်တို့ မိသားစုမှာ ကိုလူထွေးကို အကိုကြီးအဖြစ် မွေးစားပါလား ဖိုးစိန်ရယ်...
ဖိုးစိန်ကို အသေချစ်... ၂၀၁၂ အထိချစ်... ကမ္ဘာပျက်တဲ့အထိ ချစ်မယ့်
အတင်းပြောတာ ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ လွမ်းစရာတွေလည်း ပါတယ်။ ကြည်နူးစရာတွေလည်း ပါတယ်။ ဟာသတွေလည်း ပါတယ်။
သြော် ဖိုးစိန်က နှစ်ဘက်ချွန်ကိုး... အခုမှ သိတယ်။ သတိထားအုံးမှ။ အဟား..
မှတ်ချက် ။ ။နှစ်ဖက်ချွန် ဆိုတာ ချွန်တွန်း လုပ်တာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ တခြား ခက်ဆစ် ဖွင့်ပါ။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘ၀လေးပဲ
အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ပါစေ ဖိုးစိန်
အလုပ်တွေ အရမ်းကြိုးစားနေလို့ ထင်တယ်...
ပျော်ပျော်ကြီးကို အုပ်သွားတယ်။ အဲလေ အတင်းတွေ ပျော်ပျော်ကြီးဖတ်သွားတယ် ပြောတာ။ ဟဲဟဲ
အကို့ ဖေနဲ့မေရဲ့ ၃၂မင်္ဂလာမှ ရတု ရတု ရတု မြောက်များစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်ပါစေ။
ဒီမိသားစု နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေး ပါတယ် ဘရာတာ